Home Wararka Alshabab oo soo bandhigtay magacyada iyo sawirrada dadkii fuliyay weerarkii Manda Bay
Alshabab oo soo bandhigtay magacyada iyo sawirrada dadkii fuliyay weerarkii Manda Bay
Ururka Argagxisada ee Alshabaab ayaa soo bandhigay Magacyada iyo Sawirrada raggii fuliyey weerarkii 5-Bishii Janaayo ee Sanadkii tegay ee 2020-ka lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee deegaanka Manda Bay ee ku yaalla gudaha dalka Kenya
Aragagaxisada Alshabaab waxa ay soo bandhigeen Magacyada ilaa iyo 5 ka tirsan mintidiintooda oo ay sheegeen in ay fuliyeen weerarkaas oo iskugu jiray qaraxyo iyo dagaal toos ah oo lagu qaaday Saldhigga ciidamada Mareykanka ee deegaanka Manda Bay.
Halkaan Ka Akhriso Magacyada
1 : Moulana Faruq Moulana (Ahmed Al-Muhajir), hoggaamiyihii kooxda una dhashay dalka Yeman.
3: Cali Maxamed Cali (Qudama Al-Muhajir), oo kasoo jeeda dalka Ethiopia, kana soo jeeda qabiilka Burj, balse ku dhahsay kuna barbaaray magaalada Nairobi.
4: Cabdilwali Muhammad Ibrahim (Moallim Omar) iyo , oo kasoo jeeda gobollada Bay iyo Bakool, islamarkaana ahaa taliye ku-xigeenkii kooxda weerarka fulisay.
5: Adam Iman Yusuf (Abdulkariim Alansari), oo kasoo jeeda gobollada Bay iyo Bakool.
Alshabaab ayaa sidoo kale baahiyay Codka Amiirka Al-Shabaab Axmad Cumar Abu Cubayda kaas oo dhaliyay shaki islamarkaana aysan iyagu sheegin xilliga sida rasmiga ah loo duubay Coodka Amiirkooda. Farrinta Codka ah ee Amiirka Alshabaab ayaa si daran loogu ammaanay kaallinta ay ka qaadanayaan waxa ay ugu yeereen dagaalka xaqa ah ee Mareykanka,islamarkaana ku tilmaamay geesiyaal sida uu hadalka u dhigay.
Inta la xaqiijiyay weerarkii Saldhigga deegaanka Manda Bay ayaa waxaa lagu dilay 3-qof oo Mareykan ah, oo isugu jiray laba qandaraasle iyo Askari ka tirsan ciidamada Mareykanka, Waxaa lagu dhaawacay Askari kale oo Mareykan ah.